Snapchat ndeimwe yeanopindwa muropa nemagariro emapuratifomu. Iyo yakakurumbira pakati pevashandisi nekuda kwezvikonzero zvikuru zviviri. Imwe yacho Snapchat yekuona yekuwedzera-ons semafirita uye zvinyorwa zvaunogona kushandisa paunotumira meseji. Chikonzero chechipiri ndiyo yemubhadharo weAppiro system inokupa iwe mibairo zvakanyanya paunotumira iwo mameseji kune vamwe vashandisi.
zvose zviri zviviri Snapchat shamwari emojis uye Snapchat Trophies yaimbove iri chikamu cheiyo system. Nekudaro, iko zvino zvinoita sekunge misungo yakatsiviwa nechimwe chinhu chinonzi Snapchat Charms. Ngatitarisei kune izvo imwe neimwe Snapchat Charm zvinoreva, nzira dzekuwana, pamwe nezvakaitika kuSyapchat Trophies.
Chii Chakaitika Kune Snapchat Trophies?
Snapchat aimbove nechinhu chakakurumbira chinonzi Trophies. Chaizvoizvo yaive yakavanzika mubayiro system iyo yaitendera iwe kuvhura mamwe mabheji kana iwe uchinge wawana chimwe chinhu mukati meapp.
Snapchat aive anopfuura makumi mashanu akasiyana e "akavharwa" emojis ayo aimiririra Trophies. Kuti uvhureurure, iwe unofanirwa kutumira imwe nhamba yemameseji, ita shamwari nyowani, kana kutongo zivisa yako email kero. Wese mushandisi aigona kuwana yavo Trophies kuburikidza ne Snapchat Trophy kesi.
Nezvazvino uno kuvandudza, Snapchat yakatsiva Trophies nechimwe chinhu chakafanana chinonzi Charms.
Iko Kwaunowana Yako Snapchat Charms
Iwe unogona kuwana yako Snapchat Charms mune yako hushamwari ruzivo nemumwe Snapchat mushandisi.
Vhura Snapchat pane yako kamera kamera.
Shandisa kutsvaka bhaini kunyora rakatarwa zita reshamwari mukati, kana enda kune tauriranai list.
Sarudza imwe yeshamwari dzako Snapchat uye tinya pane yavo yezita.
Mukona yokumusoro rekona yejira, tsvaga iyo chiratidzo chemushandisi kana yavo Bitmoji uye tinya pazviri.
Skrira pasi uye uwane nemazango pazasi pezita reshamwari yako.
Wakavhura here hurukuro neshamwari yako uye usawane maCharm akawanda? Heano maitiro ekuwana akawanda acho.
Sei Kuwana Snapchat Charms
Iwe neshamwari dzako munokwanisa kuwana Charms dzakasiyana zvichienderana nehukama hwenyu. Izvi zvinosanganisira kangani uye kangani snaps iwe waunotumira kune mumwe, uyezve kuti wakakwana sei Snapchat profiles yako.
Snapchat inokupa iwe pachako Charms nyowani kana iwe ukaringana maitiro. Unogona kuwana Charms zvine chekuita nemazuva ako ekuzvarwa, mazita emawoko, shamwari yako emojis, kana Bitmoji.
Iwe haugone kunyatso kutonga kuti ndeapi kana kuti mangani iwe auchawana. Nekudaro, kana iwe uchida kuona zvido zvitsva zvichiratidzika muhukama hwako, ita shuwa kupurudzirana kazhinji, uye chengetedza yako Snapchat profiles kusvika ikozvino.
Yakazara Snapchat Charm Chinyorwa
Kusiyana neTrophies, maCharms ari mazhinji uye anosiyana zvichienderana neushamwari hwako nemushandisi. Ivo vanokupa zvimwe zvakawanda nezverudzi rwehukama hwauve nahwo neshamwari, sekufanana kwako neshura.
Kunyangwe Snapchat ichivimbisa kuwedzera Charms mune ramangwana, pane vangangosvika makumi matatu pane iwo paapp izvozvi.
Snapchat Birthday Zvakanaka
Sezvatakambotaura, dzimwe hono dzinogona kuvhurwa nekuzadza chete mune yako Snapchat profil.
Kana iwe newe neshamwari mave makazadza mumazuva avo ekuzvarwa mune yako Snapchat profiles, iwe uchawana Astrological Sign Charm nezviratidzo zvako zodiac.
Snapchat inokupa iwe runako kana iwe uye neyechiratidzo chezodiac shamwari yako uchiwirirana. Icharatidza zvakare hunhu hwako hunhu uye hunhu hunobatanidza imi vaviri (maererano nekuongorora nyeredzi).
Zuva rekuzvarwa Mapatya
Kana iwe neshamwari yako mune mazuva ekuzvarwa muvhiki imwe chete iyoyo, muchazarura Zuva rekuzvarwa Mapatya. Mwaka hauna basa pano, chero bedzi mazuva ako ekuzvarwa ari mashoma pamazuva manomwe.
Hafu yekuzvarwa Mapatya
Kana iwe neshamwari yako muine mazuva ekuzvarwa nemwedzi mitanhatu musiyane, munowana Hafu yekuzvarwa Mapatya Charm.
Ichi chihwitsi chaunozoona kana zuva rekuzvarwa kweshamwari yako richiswedera.
Dombo rekuzvarwa kweshamwari
Iwe zvakare uchaona shamwari yako yekuzvarwa Charm mune iyo rondedzero. Icho chidiki chidiki chinokanganisa talisman icho Snapchat chinopa munhu wese maererano nemwedzi wavakazvarwa mairi.
Snapchat Hushamwari Shamwari
Chikamu chikuru pane zvese zveSnapchat Charms ndihwo Ushamwari Charms. Ndidzo idzo dzine chekuita neyako kangani uye yakawanda sei iwe vaviri unoramba uchibatana paapp.
Paunenge uine itsva nyowani Snapchat account uye usina imwe yepamusoro shamwari pazviri parizvino, unogona kuwana New Shamwari Charm. Izvo zvinoratidzika nekukurumidza kana iwe ukawedzera mushandisi mutsva kushamwari shamwari dzako.
Zvakafanana neshamwari emojis, iwe unogona kuwana ichi kara mushanduro nhatu dzakasiyana zvichienderana nekuti wakagara riinhi shamwari yepamoyo pane programu.
Kana iwe neshamwari yako mukagoverana shamwari yepamoyo kubva kuVakanaka Shamwari chikamu, iwe uchaona Mutual BFs Charm ichibuda pane yako chinyorwa.
Izvi zvinorema. Kana iwe ukawana urwu runhare, zvinoreva kuti iwe neshamwari yako munogoverana zvakafanana # 1 Shamwari Yakanakisa pane lokusebenza. Zvakadaro, ndeimwe runako yaunogona kuwana netsaona.
Paunongotanga kuchinjanisa snaps pamwe neshamwari yako zuva nezuva pasina kukundikana, iwe uchawana Snapstreak Charm nehuwandu hwemazuva pazviri.
Snapchat Ramba Uchibate Makuru
Iwe unozoona zvimwe zvakawanda izvi paSnapchat sezvo ivo vakapihwa kunyangwe iwe ukasaramba uchitaurirana nemunhu zvachose.
Kana iwe ukawedzera kubatana pane Snapchat uye usataura navo, iwe uchaona iyi Snapchat Charm ichibuda pane chinyorwa.
Kana iwe ukachinjana snaps nemumwe nemumwe kazhinji, iwe unowana iyo In Kubata Charm.
Chave Chechipiri, Chave Maminiti & Chave Chinguva
Ndiwo matatu madhiri anozoonekwa kana iwe ukarasikirwa nehukama nemunhu. Zvichienderana nehuwandu hwenguva, zvinoti "yave yechipiri, miniti kana chinguva". Ndiwo Snapchat anokupa iwe kushoma nudge.
Kana iwe neshamwari yako paSnapchat usati wagara kwegore rinopfuura, iwe unozowana izvi zvinoshungurudza Ive Zvave Nokusingaperi Charm.
Snapchat Chikamu Charms
Nekushandisa iyo app mazuva ese kutumira snaps uye nyaya iwe unowedzera yako Snapchat Score. Kana zvese zvako uye shamwari shamwari dzako zvasvika kune imwe nhanho, iyo app inokupa iwe Score Charm.
Aya anouya mune mashanu akasiyana tiers senyeredzi shanu: Snap Rookies nenyeredzi imwe, Sophomores, Masters, Heroes, uye Snap Ngano nenyeredzi shanu zvinoenderana.
Kune mamwezve makara maviri akakosha asiri emunhu wese. The Snapchat OGs Charm ndeye avo chete vashandisi avo vakatanga kushandisa iyo programu shure muna 2013, uye iyo Mushandi Charm ndeye chete yevashandi veSnapchat.
Maitiro Ekuhwanda & Kudzorera Mapfumo
Your Hushamwari paSnapchat hwakavanzika, ndozvakaitawo maCharm. Iwe unogona kuvanza kana kuvadzosera kune yako mbiri chero nguva. Heano maitiro ekuvanza Snapchat Charm.
Tsvaga Charm yaungada kuvanda.
Tapira pane katatu dots pakona yepamusoro kurudyi yeCharm.
sarudza Viga Charm.
Kuti udzore Charm, enda kune yako Shamwari mbiri. Mune Charm runyorwa iwe zvino uchawana chitsva yakavanzwa bhatani. Dzvanya pairi kuti uone ese ako akavanzika Maoko uye sarudza iyo yaungada kudzoreredza.
Nguva yekuVadzidzisa Vese
Snapchat ndeimwe yeaya manyorerwo anozivikanwa zvakanyanya pakati pevana, uye izvo zvirokwazvo unofanirwa kuziva nezvazvo somubereki. Kana iwe usingakodzeri mune chero eaya mapoka, zvinogona kuramba zvichinakidza kuongorora chimwe chinhu chitsva uye chakasiyana.
Wakatarisa here itsva Snapchat Charms yatove? Iwe unofara here nekutsiva kana iwe unoda Trophies pamusoro pavo? Goverana pfungwa dzako nesu mune zvakataurwa pazasi.
Gadzira: Bluestacks Snapchat isiri kushanda / chimwe chinhu chakatadza